मृगौल रोग | स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होमपेज » डक्टर्स आर्टिकल » "मृगौल रोग" बढ्दैछ मिर्गौला एट्याक सामान्य लापरवाहीले मिर्गौला रोगको खतरा – डा. अनिल बराल, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल / हरेक बर्ष मार्च महिनाको दोश्रो बिहीबार अर्थात् मार्च १४ मा विश्व मिर्गौला दिवस मनाइन्छ । यो आठौं विश्व मिर्गाैला दिवस हो । यो दिवस अन्तर्राष्ट्रिय मिर्गौला समाज र मिर्गाैलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले शुरु गरेको हो [...]
जीवन लम्ब्याउने बिधी : डायलसिस डा. शक्ति बस्नेत, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल / मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि बिरामीको जीवन बचाउन रेनल रिपेलेस्मेन्ट थेरापी गरिन्छ । यो थेरापी ३ प्रकारको हुन्छ । हेमोडायलसिस, प्रेटोनल डायलसिस र मिर्गौला प्रत्यरोपण । रेनल रिपेलेस्मेन्ट थेरापी मध्ये हेमोडायलसिसले मिर्गौला फेल भएका बिरामीको रगत सफा गर्न र रगतबाट बिकारयुक्त पदार्थहरुलाई छानेर शुद्ध गर्न सहयोग गर्दछ [...]
मधुमेह र मृगौला रोग डा. अनिल बराल, मधुमेह भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्नु हो । रगतमा चिनीको मात्रा बढेर पिसाबमा पनि चिनी नै जाने भएकाले मधुमेह भनिएको हो । मधुमेह इन्सुलिनको अभाव वा इन्सुलिनले काम गर्न नसक्दा हुन्छ । इन्सुलिनले रगतको ग्लुकोजलाई उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि सहयोग गर्दछ । साथै बढी भएको ग्लूकोजलाई ग्लाइकोजनमा परिणतगरी संचय गर्दछ [...]
वर्षमा एकपटक मृगौला परीक्षण गरौं डा. ऋषि काफ्ले, बरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ / नेपालमा मृगौला रोग लाग्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको चाप हेर्दा पछिल्लो समयमा मृगौला रोगीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गैरहेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मृगौला रोग लागेको पत्ता लगाउन सर्वप्रथम मृगौला परिक्षण गर्नुपर्छ । बिना परिक्षण मृगौला रोग थाहा पाउन सकिँदैन । मृगौला [...]
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि के मा ध्यान दिने ? डा. दिव्या सिंह, प्रत्यारोपण फिजिसियन / मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएमा बिरामीको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छन् । शरीरमा कुनै नयाँ वस्तु राख्दा शरीरले नै त्यसलाई प्रतिकार गर्छ । नयाँ मिर्गौला राख्नासाथ शरीरले त्यो आफ्नो हिस्सा नभई बाहिरी वस्तु हो भनी त्यसलाई बहिस्कार गर्न [...]
Recent Posts	आधा दर्जन बेबारीसे मृत शिशुहरु भेटिए